भातृ संघको नेतृत्व चयन गर्न काँग्रेस गुर्भाकोट ८ को भव्य कार्यक्रम |
भातृ संघको नेतृत्व चयन गर्न काँग्रेस गुर्भाकोट ८ को भव्य कार्यक्रम
२०७८ फाल्गुन १३ गते, शुक्रबार , ०३:१३ मा प्रकाशित
सुर्खेत। नेपाली काँग्रेस गुर्भाकोट ८ ले आफ्ना भातृ तथा शुभेच्छुक संघहरु गठन गरेको छ। बिहीवार मेहेलकुनाको खैरेनीमा भव्य कार्यक्रम आयोजना गरि भातृ तथा शुभेच्छुक संघहरु गठन गरिएको हो। कार्यक्रममा नेपाल तरुण दल, नेपाल महिला संघ, नेपाल आदिवासी जनजाति संघ र नेपाल दलित संघको वडा कार्य समिति गठन गरिएको वडा सभापति किरण कुमार वि.क.ले बताए।
भातृ संघहरु मध्ये नेपाल आदिवासी जनजाति संघले २६ सदस्यीय वडा कार्य समिति गठन गरेको छ। दिपक बुढा मगरको अध्यक्षतामा संघको वडा कार्य समिति गठन गरिएको हो। संघको उपाध्यक्षमा रत्नदेवी पुन र भूपेन्द्र घर्ती, सचिवमा प्रेम बुढा र बसन्ती घर्ती, सहसचिवमा कर्ण बहादुर मगर र राम बहादुर पुन मगर, कोषाध्यक्षमा पुष्पा पुन चयन भएका छन्।
यस्तै, नेपाल दलित संघले ३० सदस्यीय वडा कार्यसमिति गठन गरेको छ। नन्द बहादुर वि.क.को अध्यक्षतामा संघको वडा कार्यसमिति गठन गरिएको हो। संघको उपाध्यक्षमा ललिता सुनार र भावना नेपाली, सचिवमा केशरी नेपाली र दिपा वि.क., सहसचिवमा सिता सुनार र जयसरा कामी, कोषाध्यक्षमा ससिला वि.क. चयन भएका छन्।
यस्तै नेपाल तरुण दलले ४२ सदस्यीय वडा कार्य समिति गठन गरेको छ। चितेन्द्र वि.क.को अध्यक्षतामा दलको वडा कार्य समिति गठन गरिएको हो। दलको उपाध्यक्षमा कमल वि.क. र राम बहादुर वि.क., सचिवमा प्रेम परियार, सहसचिवमा रुद्र बहादुर घर्ती र कोषाध्यक्षमा तिलक पुन चयन भएका छन्।
यसैगरी नेपाल महिला संघले ३८ सदस्यीय वडा कार्य समिति गठन गरेको छ। खिमा वि.क.को अध्यक्षतामा वडा कार्य समिति गठन गरिएको हो। संघको उपाध्यक्षमा लालमाया वली र मान कुमारी माझी, सचिवमा कल्पना वली र रुपा आग्री, सहसचिवमा पवित्रा वि.क. र कमला खड्का, कोषाध्यक्षमा आस्था कामी चयन भएका छन्।
भातृ तथा शुभेच्छुक संघ गठन कार्यक्रमलाई नेपाली काँग्रेस कर्णाली प्रदेश कार्य समितिका सदस्य चित्र बहादुर रेग्मी, कर्णाली प्रदेश कार्यसमितिका सदस्य मैना वि.क., नेपाली काँग्रेस सुर्खेतका उपसभापति विष्णु बहादुर खड्का, जिल्ला कार्य समिति सदस्य नविन सुनार, गुर्भाकोटका नगर सभापति हस्त पुन लगायतका नेताहरुले सम्बोधन गरेका थिए।
कार्यक्रम सुरु हुनुअघि वडा सभापति किरण कुमार वि.क.को टोल सुन्दरनगरबाट र्याली अस्पताल लाइन हुँदै बजार क्षेत्र परिक्रमा गरि कार्यक्रम स्थल खैरेनी पुगेको थियो।
अघिल्लो सामाग्रीयसरी सुरु हुँदैछ गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट अन्तराष्ट्रिय उडान
पछिल्लो सामाग्रीरुसी सेनासँग लड्न युक्रेनी सडकमा सैन्य गाडी, स्वयंसेवकलाई बन्दुक दिइयो